Isu takaedza WRBLS tambo dzeApple Watch | Ndinobva mac
Isu takaedza WRBLS tambo dzeApple Watch
Inenge mwedzi mina yapfuura takataura nezvekutanga kutsva kwemaApple Watch mabhendi atakawana achifadza chaizvo maererano nedhizaini yavo. Chokwadi ndechekuti iyo femu yakatanga chirongwa chitsva umo, sevamwe vazhinji, chavaida yaive mari. Sarudzo yakanakisa yekuwana mari iyi uyezve zvive pachena kuti chigadzirwa chako chiri kuzotengesa mushe ndechekuwandisa mari, uye ndeipi nzira iri nani pane kickstarter yekusimudza mari uye kutanga bhizinesi nekutengesa. Pane ino chiitiko WRBLS yakakumbira 35.000 euros yemari uye vakaiwana nekusvika pamusoro € 36.252. Iye zvino tambo dzekutanga dzava kusvika kune varidzi vadzo uye pano isu tirikukusiya wongororo yevaviri vavo.
Chinhu chinonyanya kushamisa pamabhande eApple Watch ndechekuti kuve nyore kubvisa nekupfeka, isu tine sarudzo dzakasiyana siyana dziripo uye mune ino magadzirirwo eWRBLS ndiwo anonyanya kufadza kune vese vashandisi, chokwadi ndechekuti isu tinofarira zvese kana tinenge tese.
1 Zvinhu zvekuvaka
2 Dhizaini uye kurongedza
Mune ino kesi isu tinofanirwa kutaura izvozvo tambo dzese dzavainadzo mukatalog yavo silicone. Zviripachena kuti iyi inogona kuve poindi kana inopesana zvinoenderana nemushandisi, asi kwandiri ini ndakajaira kwavari uye ndinongova neyesimbi yandinoshandisa pane dzimwe nhambo. Iwo ekupedzisa akanaka asi mukati memavhiki maviri kana zvakadaro ekushandisa kana tacherekedza dambudziko diki rine chekuita nekudzikwa kweimwe yeaya tambo uye ndeyekuti chibhakera kana bhurasho ndakasvuura zvishoma rutivi rweuyo wandinoda zvakanyanya. Isu tinosiya iwo mufananidzo pazasi kuti iwe uone uye ini ndinofunga rakanyanya kunetsa netambo yangu kana kuti ndiri musango sei, nekuti imwe yacho yakakwana nenguva imwechete yekushandisa:
Dhizaini uye kurongedza
Mupfungwa iyi, isu tinongova nemazwi akanaka ekambani nyowani uye ndezvekuti chaizvo kana isu tasvika pawebhu hatitsvage modhi yakashata kana yakaipa kupera. Zvinogoneka kuti tinoda vamwe kupfuura vamwe, asi kazhinji dhizaini yevakomana ava yakanaka kwazvo. Kune rimwe divi, kuratidzwa kwetambo kunoratidzika kwatiri kuve kwakatanhamara sezvo mharidzo yacho yakakosha murudzi urwu rwezvigadzirwa uye aya tambo dzemicheka dzine mharidzo yakanaka kwazvo kwatinowana matatu marudzi eakasiyana dhizaini: Masitaera emumaguta, Bhizinesi rekare uye Sporty.
Tichifunga nezve diki diki netambo yangu yandaida Kazhinji, zvinoratidzika kwandiri sechigadzirwa chinonakidza cheApple Watch. Ehezve kana iwe uinazvo muruoko rwako vanokupa iko kunzwa kwechinhu chakapedzwa chigadzirwa, asi avo vasinganzwe kugadzikana nesilicone tambo, izvi hazvisi zvake. Isu zvakare tine matanho ese ekusarudza kubva, kungoita Apple tambo, angave ari 42mm kana 38mm uye S / M kana M / L saizi. Pakuvharwa uye chikamu chechisungo newatch zvishoma kana pasina chekusimbisa sezvo vachishanda nemazvo uye hatina kunge tave nematambudziko.
Tenga zvako pano
Kuvharwa kwemhando yepamusoro
Dambudziko rangu risina bhandi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu takaedza WRBLS tambo dzeApple Watch
Chitoro chitsva uye chekutanga cheApple muBrooklyn kuvhura muna Chikunguru 30
CarPlay ichauyawo kuKorea mota brand KIA